rano & menaka porofo Fabric ★ Lower Cost Water & oil proof Fabric Manufacturer ★ 1 5 10 25 Nylon Filter Bag,polyester,PP Filter Bag ★ Nylon Filter Mesh Screen
rano & menaka porofo Fabric -
Ny entona izay mety ahitana hanivana mila mando, hygroscopic sy deliquescent powders ao amin'ny sivana kitapo hazakazaka. Tontolo iainana toy izany dia hahatonga ny vovoka fanesorana sarotra kokoa, dia eo ambanin'ny hafanana avo, dia misy fiantraikany eo amin'ny ara-dalàna ny asa amin'ny alalan'ny dewfall. Tsotra tsapan'ny lamba tsy maintsy mampifanaraka ny fitsaboana manokana mba hanatsarana ny fahombiazan'ny miasa.
hanivana Bag Mila manampy ny tantera-drano na oilproof farany fitsaboana eny ambonin'ny sivana lamba, Raha jerena izany. Lamba Filter Cox mpanamboatra ny polyester(pet) nahatsapa lamba, polypropylene(p) Nahatsapa lamba sivana, anti-voasakantsakan'ny sivana felts, ary aramid lamba miaraka amin'ny mpanao fluoride. Rehetra karazana sivana fanjaitra nahatsiaro lamba no nahazo ny tsara indrindra sy ny menaka ny rano ody ody vokany.
Rehefa avy ny rano sy ny menaka ody finish treatment, Tsy vitany ihany ny vokatry ny fenitra-pirenena, fa koa ny sivana niseho ara-nofo am-boalohany dia tsara foana rehetra, ny fanjaitra nahatsapa lamba sivana koa mandrafitra ny molekiolan'ny sakana manodidina ny fibre, izay mety hisakana ny rano sy ny loto ary ny famoahana mifandray.
Raha ampitahaina amin'ny haino aman-jery mahazatra sivana, tantera-drano na oilproof sivana sy ny sivana kitapo lamba manana ny toetra; koa, izany koa ny anti-firaiketan'ny sy ny fahamoran ho an'ny mofomamy peeling eny. Izany vokatra no mampiasa be ny toerana mando sy ny rainy.
Model Material Breaking strength(N / 5×20cm) hateviny Weight (g/m2) Air permeability
Pet filter fabric 1000 1200 1.8(mm) 500 >10(m3 / m2.min)
Pe The antistatic lamba 1000 1200 1.8(mm) 500 >10(m3 / m2.min)
Aramid sivana lamba 800 1000 1.8(mm) 769
Ryton sivana lamba 1200 1300 1.8(mm) 500 >15(m3 / m2.min)
Fanjaitra fiberglass tantera-drano sy oilproof sivana misy ihany koa ny lamba.
rano & oil proof Fabric Tags : hanivana Lamba
5 responses to “rano & menaka porofo Fabric”